Ungakuthuthukisa kanjani ukusebenza kwemidlalo ku-Android | Izindaba zamagajethi
Ngenxa yokuboshwa kwethu, akukho okunye esingakwenza ngaphandle kokufuna ukuzijabulisa ekhaya. Kunezindlela eziningi zalokhu futhi enye yazo iMidlalo Yevidiyo. Akuwona wonke umuntu onekhonsoli ngakho-ke okunye ongakwenza ukudlala nge-smartphone noma ithebhulethi yakho, kepha hhayi kuwo wonke lamadivayisi imidlalo enamandla kakhulu isebenza kahle, ngakho-ke akuyona into egculisayo. Kunezindlela zokunciphisa le nkinga kancane.
Ngalesi sikhathi sibhekisa kuhlelo lokusebenza olutholakala esitolo sohlelo lokusebenza lweGoogle. Ubizwa ngegama Abadlali be-GLTool futhi kungaba ithuluzi eliwusizo kakhulu kuwo wonke lawo madivayisi lapho kunzima khona ukuthi umdlalo usebenze kahle. Uhlelo lokusebenza olwenzelwe umakhi wePUB Gfx + Tool okufaka elinye ithuluzi lokwenza ngcono kakhulu le-GFX.
1 AmaGamers GLTool alungele ukuthuthukisa ukusebenza emidlalweni yethu esiyithandayo.
2 Ukucushwa okungenzeka nezinketho
2.1 Umdlalo turbo
2.2 Game Sombhalo
3 Izinketho zokukhokha zenguqulo ye-Pro
4 Isincomo somhleli
AmaGamers GLTool alungele ukuthuthukisa ukusebenza emidlalweni yethu esiyithandayo.
Amagama angazwakala njenge- "Chinese" kubasebenzisi abaningi "CPU, GPU noma i-RAM" kepha zinquma izici zokusebenza kahle kwe-terminal yethu noma ikhompyutha. Lolu hlelo lokusebenza lusebenza ngqo ekwandiseni lezi zici kuze kube sezingeni eliphezulu futhi zengezwe imodi yemidlalo ezenzakalelayo. Abadali bohlelo lokusebenza bagqamisa lokho awasebenzisi ama-algorithms "AI" mbumbulu noma yini efana naleyoEsikhundleni salokho, bazama ukusebenzisa amandla wefoni ngokugcwele.
Ngokushesha nje lapho uvula uhlelo lokusebenza, into yokuqala ezolwenza hlaziya ukuthi iyiphi iprosesa nokuthi iyiphi i-GPU yethu enayo. Ngokuya ngalokhu imisebenzi ingahluka. Endabeni yami ngisebenzise iprosesa ephezulu yeQualcomm kusuka ku-2017 (I-Snapdragon 835), ne-GPU yayo ehambisanayo I-Adreno (540). Kusukela kule phaneli sinokufinyelela kuhlu lwezinhlelo zokusebenza (futhi ngenxa yalokho sikhethe ukuthi iyiphi esifuna yenziwe isebenze ngemodi yegeyimu) kanye nemodi yemisebenzi ekhokhelwayo. Uma senza ukunyakaza kwe-lateral sifinyelela kumenyu ye- izilungiselelo zezindlela zemidlalo.
Ukucushwa okungenzeka nezinketho
Siqala ngokubhekisa kwimodi ye-'Game turbo 'ezosisiza ukuthi sithuthukise izici eziyisisekelo zemodi yomdlalo wendabuko.
I-CPU ne-GPU Boost: Zonke izakhi ze CPU futhi lezo zinqubo eziyithonyayo ziyasuswa, kanye nalezo zinqubo ezidinga umzamo kusuka ku- GPU (akwenzeki njalo ukukhubaza, kuya ngesendlalelo sokwenza ngokwezifiso). Lokhu kuyasiza kakhulu ezimweni zemidlalo elula kangangoba ayikwazi ukuvula wonke ama-cores.
Ukukhishwa Kwememori ye-RAM: Zonke izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa izinsiza ngemuva zizosuselwa kuzo khulula yonke i-RAM futhi wenze itholakalele ukudlala.
Ukuqapha ukusebenza kohlelo: Lokhu kuzosixwayisa uma kwenzeka noma yiluphi uhlelo lokusebenza noma inqubo efonini iphazamisa ukusebenza komdlalo esisebenza ngaleso sikhathi.
Lezi yizo zonke izinketho eziyisisekelo kunqubo yemidlalo yendabuko obekungahle kwanele uku yenza kahle ukusebenza ukungabi nezinkinga kunoma yimuphi umdlalo, kepha ake sihlole uhla lwezinketho esivunyelwa lolu hlelo lokusebenza.
Ukulungiswa komdlalo: I-Podemos lungisa ukulungiswa kusuka ku-940 × 540 (qHD) kuya ku-2560 × 1440 (WQHD). Ilusizo uma kwenzeka kunamaselula anezinqumo eziphakeme uma kwenzeka sifuna uhlelo luye ku-2K kepha imidlalo iye phansi ku-Full HD noma i-HD. Kumele sikukhumbule lokho ukusebenza komdlalo kuzoba ngaphezulu uma sehlisa isinqumo noma ngabe kubukeka kubi kakhulu.
Imidwebo: Singakwazi ukuzivumelanisa zenziwa kanjani izithombe zemidlalo. Ukulungisa izithunzi, ukwakheka nokunye komdlalo. Singakhetha ukwakheka ngokulungiswa okuphezulu, ithambile, i-HDR ... Njll Njengoba kwenziwa kwi-PC yempilo yonke.
Ukukhethwa kwe-FPS (Amafreyimu ngomzuzwana): Lokhu ngokungangabazeki kuyisethingi ebaluleke kunazo zonke yokudlala, ngoba uketshezi oludluliswa ngumdlalo kuncike kulo, Kuphawuleka ikakhulukazi kumaShotters njenge-Fortnite, Call of Duty noma i-PUBG. Kuzovumela ukudlala kuma-FPS angama-60 kulawo mafoni okuthi, ngeprosesa ngayinye, abe nokusetha okulinganiselwe ngaphakathi komdlalo kwama-FPS angama-30.
Izihlungi zesithombe: Izihlungi zombala zisetshenziswe ngaphezu komdlalo uqobo. Benza njengokubukeka komdlalo. Singakhetha imodi ye-movie, eyiqiniso, ebukhoma ... Njll
Izithunzi: kukuvumela ukuthi ungeze izithunzi ezingeziwe kumageyimu ayixhasayo.
I-MSAA: Lokhu kulungiselelwa kuvame kakhulu emidlalweni ye-PC. I-Multisample anti-aliasing, iyi- inqubo yokwenza bushelelezi ukuthuthukisa ikhwalithi yesithombe.
Gqamisa ikakhulukazi lokho uma siphoqa i-FPS, ukufiphaza nabanye, iselula ingahlupheka kakhulu kunesidingo ikakhulukazi uma ibanga eliphansi / eliphakathi. Noma kunjalo, ungahlola izilungiselelo kuze kube yilapho uthola eyodwa enhle kakhulu yedivayisi yakho.
Izinketho zokukhokha zenguqulo ye-Pro
Ukuthuthukiswa kwe-Ping ngokushintsha kwe-DNS: Kusivumela ukuthi sishintshe isiphakeli se-DNS kusuka kuhlelo lokusebenza ukuzama ukuthuthukisa i-ping yomdlalo we-inthanethi.
Ukuhlolwa kwe-Ping: Singakwazi ukwenza izivivinyo kusuka kuhlelo lokusebenza nge-DNS ehlukile ukuthola eyodwa ene-ping ephansi kunazo zonke.
Imodi ye-Zero-lag: Amasethingi wegeyimu alungiswa ngokuzenzakalela ukuze inhloso enkulu ukunciphisa ukusilela.
Imidwebo yezinga eliphansi: Uma ngabe idivayisi yakho iphansi, kusetshenziswa izilungiselelo ezithile ukuze ikwazi ukuhambisa imidlalo ngokufanele.
Uma sikubheka lokho uhlelo lokusebenza lwe-Pro lubiza ngentengo engu- € 0,99Sincoma ukuyithenga ngaphandle kokucabanga, ngoba uma sifuna ukudlala ku-inthanethi, i-ping noma i-lag iyanquma, futhi uma idivayisi yethu ingenamandla anele okuhambisa imidlalo kalula.
Lapha singalanda inguqulo MAHHALA futhi i PRO.
Kumele sikhumbule ukuthi konke Lezi zilungiselelo zithinta impilo yebhethri noma izinga lokushisa lokugcina, zombili izinto zixhumene, amandla athe xaxa okudingeka esigungwini, ukuphakama kwezinga lokushisa nokuphakama kwezinga lokushisa, kuphakama ukusetshenziswa.
Isincomo sami ukuthi ake sisebenzise kahle ukuze sigcine ibhalansi phakathi kokusebenzisa nokwenza kahle, ngoba akusizi ngalutho uma umdlalo usebenza ngokumangalisayo uma ibhethri lihlala kancane kakhulu. Akunconyelwa nokuthi sixhume i-terminal kwishaja ngenkathi sidlala, lokhu kungaholela ekuwohlokeni okukhulu kwebhethri ngenxa yezinga lokushisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Ungakuthuthukisa kanjani ukusebenza kwamageyimu ku-Android
Izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuhlonza umculo